Rastrabani.com | काठमाडौंका ट्राफिक प्रहरीः कसैको खुट्टो भाँचियो, कसैलाई क्यान्सर - Rastrabani.com काठमाडौंका ट्राफिक प्रहरीः कसैको खुट्टो भाँचियो, कसैलाई क्यान्सर - Rastrabani.com
काठमाडौंका ट्राफिक प्रहरीः कसैको खुट्टो भाँचियो, कसैलाई क्यान्सर
मापसे गरेर आफ्नै अगाडिबाट भाग्न लागेका अटेरी चालकलाई रोक्न खोज्दा खुट्टा भाँचिएर ट्राफिक प्रहरी घाइते भए । यस्तै-यस्तै घटनामा परेका ८ जना ट्राफिक प्रहरीहरु यतिबेला न्युरो, बीएण्डबी र अर्थोपेडिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । मापसे गरेका मोटरसाइकल चालकले गरेको दुर्व्यवहारका कारण घाइते भएर अर्का एकजना ट्राफिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
रक्सी अरुले पिउँछन्, तिनको मुख सुँघ्दै चिसो सडकमा रातभर ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ट्राफिक प्रहरीलाई । जँड्याहाहरु परैबाट भाग्छन् । तर, तिनको बाटो कुर्दै शून्य डिग्रीको चिसोमा रातको १२ बजाउनुपपर्छ जवानहरुले ।
काठमाडौं ट्राफिकमा पोस्टिङ भएपछि सडकमा व्यहोर्ने तनावकै कारण उच्च रक्तचापका कारण १६ जना ट्राफिक प्रहरीहरु रगत पातलो बनाउने ट्याब्लेट खाएर काममा जान थालेका छन् ।
काठमाडौंको धुँवाले एकजना ट्राफिकलाई क्यान्सर भएको छ । उनी भक्तपुरमा उपचार गराइरहेका छन् । ठाडो लाइन ड्युटीमा बसेकै कारण नशा च्यापिने, ढाड सड्किने, र श्वासप्रश्वासको समस्या आएर तीनजना ट्राफिक ड्युटीमा जान सकेका छैनन् ।
एकजना ट्राफिक प्रहरी मृगौलाको अपरेशन गरेर ब्यारेकमा थन्किएका छन् ।
विरामी परेका ट्राफिकलाई उपचार खर्च दिने व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गरेको छैन । तर, २२ जना प्रहरी ड्युटीकै क्रममा, अर्थात् कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा अस्पतालमा छन् ।
भीआइपीले झनै सास्ती दिन्छन्
बिहान ७ देखि ११ बजेसम्मको पहिलो पिकआवरको ड्युटी र अपराह्न ३ देखि ६ बजेसम्मको दोस्रो पिकआवर ड्युटी निकै कठिन छ । चिसो, धुँवा, धुलो र गाडी चलाउने मानिसका बचनहरु कति खानुपर्छ, ठेगान छैन । त्यसमाथि ‘ठाडो लाइन’ भनिने माइतीघरदेखि जय नेपाल हलसम्मको सवारी चाप, भीआइपीहरुलाई एकछिन पनि जाममा पार्न नहुने चुनौति छ ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुलाई ट्राफिक जाम लाग्दैन । यी भीआइपीलाई जाममुक्त बनाउन एकातर्फबाट गाडीहरु छोडेको छोड्यै गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ लामो समयको जाममा परेका सर्वसाधारण रिसले चुर हुने । निषेधित भनेर के गर्नु, सबैले एकैचोटि ट्ँयार-ट्ँयार पारेर हर्न बजाएपछि कारवाही गर्नु कसलाई ? सेटमा ट्राफिक कन्ट्रोलले गाली गर्छ- ‘क्या हो यो ? हर्न बजेको छ, कारवाही किन भएन भनेर यहाँ कम्प्लेन आइसक्यो ।’
समाचार कस्तो पनि लेख्नुपर्ने दिन आयो भने, एउटा देशको राजधानी शहरमा ट्राफिक लाइट बल्न थाल्यो ! विदेशीले सुन्दा के भन्लान् ? तर, काठमाडौंको वास्तविकता हो यो ।
काठमाडौंका सडकमा ०३८-०३९ सालदेखि ट्राफिक लाइट राखिएका छन् । तर, १२ वर्ष भयो, ती बत्ति बल्न छाडेका । अहिले फेरि ती ट्राफिक लाइट बाल्ने कोसिसमा छन्, ट्राफिकका डीआइजी सर्वेन्द्र खनाल ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बिगि्रएका ट्राफिक लाइट बनाइदिने भनेर थालेको यो काम सफल भएको छैन । तर, बल्दै नबल्ने लाइटहरु पल्याकपुलक गर्नसम्म थालेका छन् ।
सरकारले काठमाडौंमा कोरिडोरको बाटो खोल्ने क्रममा कतै पिच गरिसक्यो, कतै बाँकी छ । धोविखोला कोरिडोरमात्र बन्यो भने पनि काठमाडौंको ३० प्रतिशत ट्राफिक जाम हल हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारहरु यो काम जति ढिलो गर्न पायो, त्यति नै पैसा कमाउने पाइएला भनेर आलटाल गर्दैछन् ।
डीआइजी सर्वेन्द्रको सुधार प्रयास
काठमाडौंको ट्राफिकलाई कमाण्ड गरिरहेका डीआइजी हुन्, सर्वेन्द्र खनाल । विद्यमान प्रहरी ऐनअनुसार अबको तीन महिनापछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरिँदा आइजीपी बन्ने दौडमा सहभागी डीआइजीमध्ये उनी एक हुन् ।
खनाल बिहान उठेदेखि राति सुत्नेबेलासम्म सडकका समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
रामशाहपथस्थित ट्राफिक महाशाखामा पत्रकार पुग्दा खनाल कार्यकक्षमा नभएर मापसेको पैसा तिर्ने ठाउँमा उभिएर मापसे चालकको अनुहार नियाल्दै थिए । उनले भने, ‘यिनै महानुभावले हो, राति सुत्न दिँदैनन् । हामी यस्ताको गार्ड हुनुपरेको छ ।’
दुई साताअघि ट्राफिक प्रहरी चढेको एउटा डोजर थापागाउँ, हनुमानथान जोड्ने धोवीखोल पुलपुनि बाटो सम्याउँदै थियो । त्यही दिन रातो पुलमा पनि ट्राफिक आफैँले पुलमुनिबाट गाडी पास गराउन डोजर लगाइरहेको थियो ।
काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरु पैसा तिरेर दैनिक उडुस र उपियाँको टोकाइ खाइरहेका छन् । गन्हाउने सिटमा बस्छन् । ट्राफिकको एउटा टोलीले केही समयअघि ती यातायात व्यवसायीलाई बोलाएर भन्यो, ‘कम्तिमा गाडी त सफा राख्नुस् ।’ फलतः ट्राफिककै निगरानीमा काठमाडौंमा चल्ने सावर्जनिक यातायातले सरसफाई गर्न थाले ।
अफिस टाइम सुरु भएपछि भद्रकाली, सुन्धारातिर लडाइँ लडेजस्तै हुन्छ, माइक्रो चढ्ने यात्रुहरुको अवस्था । तर, आजकल त्यस्तो छैन । कारण हो- ट्राफिकले लाइन लागेर गाडी चढ्ने नियम बनाइदियो ।
यसरी ट्राफिक लाइट बाल्नुपर्ने, कोरिडोरको बाटो सम्याउनुपर्ने, उडुस र उपियाँमुक्त सार्वजनिक यातायात बनाउनुपर्ने र लाइन लगाएर यात्रुलाई गाडी चलाउनुपर्नेजस्ता काम ट्राफिक प्रहरीका परिभाषित जिम्मेवारीभित्र पर्दैनन् । ती कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निकाय अरु नै छन् ।
तर, जिम्मेवार निकायहरुले आ-आफ्नो काम नगरिदिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै समस्यासँग ट्राफिक प्रहरी गाँसिनुपर्छ । बाटो कहिले मेलम्ची खानेपानीले खन्छ, कहिले विद्युत प्राधिकरणले त कहिले महानगरपालिकाले ।
बाटो जसले खने पनि समस्या आउँछ, ट्राफिक जामको । आजकल काठमाडौंमा देख्न सकिन्छ, ट्राफिक प्रहरी आफैं बेल्चा बोकेर बाटो सम्याइरहेका हुन्छन् ।
ट्राफिकका कष्टका कथा अनेक छन् । ‘जागिर पुलिसमा खाएको, हेडक्वार्टर नै हाम्रा लागि सबभन्दा ठूलो निकाय हो । तर, त्यतिले सुख पाइँदैन ।’ डीआइजी खनालका अनुसार कुरा के रहेछ भने, प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहत भए पनि ट्राफिकले यातायात, वातावरण र बाणिज्य मन्त्रालय र त्यसमातहतका निकायसँग निकटता राख्नु जरुरी छ ।
साह्रै थेत्तरा छन्, नेपालका निजामति कर्मचारी । एकथोक भन्यो, अर्कैथोक गर्नेखालका । सर्वेन्द्रलाई तिनीहरुको चालढालले झगडिया बनाइसक्यो । ‘गयो, राम्रै मुखले कुरा गर्‍यो । हुन्छ-हुन्छ भन्छन् । तर, केही गर्दैनन्’, उनी दुःख सुनाउँछन्, ‘त्यसपछि के ठान्याछौ तिमीले भनेर टेबुल ठोक्नुपर्छ, अनिमात्र टेरपुच्छर लगाउँछन् ।’
यस्तो गर्नुपरेको विषयचाहिँ सडक भत्काउने, तर नपुर्ने कुराका लागि रहेछ । ‘बाटो खनेर छाडिदिन्छन्’, सुनाउँदै गए, ‘ए बाबा, पुरिदेउन भनेर हामीले हात जोड्दा पनि मान्दैनन् । त्यसपछि नचर्किएर सुखै पाइँदैन ।’
वर्षामा हिलोसँग जुधेर गन्तव्यमा पुग्नु राजधानीवासीको दिनचर्या हुन्छ । वर्षाको पिच काम लाग्दैन । त्यसैले ढुंगा हालेर प्वालहरु टाल्दा अस्थायी समाधान निस्कन्छ । महानगरपालिकालाई भन्यो, ‘किन गर्ने ?’ भनेर पन्छिन्छ । अनि, सर्वेन्द्रले ट्राफिकलाई नै वषर्ामा खाल्डो पुर्न खटाए । ‘आफू नलागी त केही हुँदै नहुने’, उनले भने, ‘हामीले नगर्दा पनि हुन्छ । तर, सडकमा बिहानदेखि रातिसम्म अभिएर सिठ्ठी हामीले फुक्नुपर्छ । धुँवा, धुलो मानौँ हाम्रै लागि उडिरहेका हुन्छन् । वर्षेझरी र हिउँदको चिसो पनि ट्राफिककै पुर्पुरोमा । कम्तिमा बाटो सफा भए धुलो त खानुपर्दैन नि ।’
सर्वेन्द्र समय-समयमा सादा पोशाकमा शहर घुम्दा रहेछन् । देख्छन्, गाडीले बुङ्बुङ्ती धुँवा फ्याँकिरहेको छ । अगाडि सिसामा हेर्‍यो, प्रदूषणमुक्त संकेतका साथ हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ ।
रहरुसय रहेछ के भने, वातावरण मन्त्रालयदेखिकै सेटिङमा हरियो स्टिकर दिइँदोरहेछ । अघिल्लो नेतृत्वका ट्राफिक कमाण्डरहरुकै सिग्नलमा केही ट्राफिक पनि त्यसमा सामेल भएको देखेपछि आजकल प्रदूषण जाँचमा सकेसम्म आफै पुग्छन्, नभए पनि विश्वासिला अधिकृत खटाउन थालेका छन् ।
ट्राफिकले सार्वजनिक सवारी साधन देख्यो कि चिट काट्न थाल्ने क्रमलाई सर्वेन्द्रले ट्राफिकमा हाजिर भएकै दिनदेखि कम गराए । बाटो-बाटोमा चिट काटिएपछि ट्राफिक महाशाखा, बग्गीखानामा कारवाही गरिएका मानिसहरुको भिड, साँझको असन-इन्द्रचोकजस्तो । ‘चिट काट्ने हैन, नियम सिकाउने, चेतावनी दिने, गल्ती दोहोर्‍याएपछि बल्ल कारवाही गर्ने’, सर्वेन्द्रले हरेक रोलकालमा भन्ने गरेका छन् ।
मापसेजत्तिकै लेन अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई पनि क्लास लिनुपर्ने र धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी कारवाही हुने गरेको छ ।
सर्वेन्द्रले लेन अनुशासनको कारवाहीको स्वरुपमा परिवर्तन गराए । पहिला दुई सय जरिवाना तिरेपछि लेन अनुशान गर्नेले मुक्ति पाउँथे । तर, अब पहिलोचोटि उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ र एक घन्टाको क्लास, दोस्रोचोटि उल्लंघन गर्नेलाई हजार रुपैयाँ जरिवाना, क्लास लिनुनपर्ने र तेस्रोचोटि वा सोभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेलाई १५ सय जरिवाना, क्लास लिनुनपर्ने नियम लगाइदिए ।
सर्वेन्द्रले चमत्कार गरिदिए, ठमेललाई सवारीमुक्त बनाएर । अहिले ठमेलको नरसिंह चोकमात्र सवारी मुक्त छ । उनलाई पहिला त्यहाँका व्यवसायीले नगर्न सुझाव दिए । तर, अत्यधिक सवारी चापका कारण शहरको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र अस्तव्यस्ता हुँदा त्यहाँको रौनक नै घटेपछि ‘पेलेरै’ सर्वेन्द्रले ठमेललाई सवारी मुक्त बनाए ।
आजकल कहिले होटल व्यवसायी, कहिले थान्का व्यवसायी त कहिले स्थानीयवासीले दिनैपिच्छेजस्तो दोसल्ला र खादा ओढाएर उनलाई सम्मान गर्न थालेका छन् ।
अब उनले न्युरोड, असन, इन्द्रचोक, पाटन दरबार स्वायरलगायतका पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्वका स्थललाई सवारीमुक्त बनाउने योजना सुनाए । त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको साथ चाहिने बताए ।
त्यसो त यसअघिका युनिटमा काम गरेबापत खादा, माला अझै ओढिरहेका छन् । अपराध महाशाखामा हुँदा उनले एसियन फुटबल कन्पिmडरेशन -एएफसी) ले हालै मलेसिया बोलाएर सम्मान गर्‍यो । अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा फुटबल खेलमा प्रतिस्पर्धीसँग म्याच फिक्सिङ (मिलेमतो) गर्ने नेपाली टिमका कप्तान सागर थापासहितको टोलीलाई पक्राउ गरेपछि सर्वेन्द्र चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । त्यसैबापत हो, उनले मलेसियामा सम्मान पाएका ।
कतिपय काम गर्नुपर्ने अरु नै छन् । तर, अरुको मुख ताक्दा सडक यात्रु र ट्राफिकले निरन्तर दुःख पाए । यसकारण हो, सबै काममा सर्वेन्द्रले अग्रसरता देखाएको । स्कुल, कलेजका बसलाई अफिस टाइमभन्दा अगाडि नै बाटो खालि गराउनेदेखि सार्वजनिक यातायातमा उडुस, उपियाँ मुक्त गर्नेसम्मका काम वास्तवमा अरुको हो । तर, दुःखचाहिँ ट्राफिकको थाप्लोमा आउनाले अझै त्यस्ता कतिपय बेसरोकारका काम गर्नै बाँकी रहेको सुनाए ।
०४६ सालमा जागिर खाएदेखि सर्वेन्द्रले थुप्रै प्रहरी युनिटको कमाण्ड सम्हाले । इन्स्पेक्टर छँदै ट्राफिक पनि बसेका रहेछन् । त्यसबेला उनैले बग्गीखाना अगाडिको नेशनल टे्रडिङको आँगनमा ट्रायल दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरेका रहेछन्, जहाँ आज पनि विहान-विहान लाइसेन्सका आवेदकहरु ट्रायल दिन पुग्छन् ।
प्रहरीका अरु युनिटमा काम गर्दा झगडिया र मुद्दा लिएर आउने, थुन्न र छोड्न सिफारिस बोक्नेसँग बढी भेट भयो । तर, ट्राफिकमा काम गर्दा बिनामुद्धाका थुपै पीडित उनले भेटे । ‘ड्युटी सडकमा छ । सडक सबैको हो । र, मान्छे पनि सबैखाले भेटिँदारहेछन्’, उनले सुनाए । यही पक्षलाई ‘रमाइलो’ का रुपमा चित्रण गर्छन् ।
टाउको दुःखेको दबाई नाइटोमा !
हिजोआज मापसे पनि उति कडा देखिँदैन । किन ? सर्वेन्द्रले भने, ‘टाउको दुख्दा नाइटोमा दबाई लगाएर हुँदैन ।’ अर्थात्, सोझा, फराकिला र घुम्ती भएको बाटो, जहाँ बढी दुर्घटना हुन्छ-मापसे चेकिङ त्यहाँ गर्ने ।
गल्ली-गल्लीबाट चोर समाए जसरी मापसे कारवाही गर्दा राजस्व त बढी उठ्ला, तर जनताले दःख धेरै पाए । कतिपय समुदायको सांस्कृति र संस्कार नै मदिरासँग जोडिएको हुन्छ । ‘बहुसांस्कृतिक देशमा ती कुरा पनि ख्याल गर्नुपरेको छ’, उनले भने ।
तर, मापसे गरिसकेपछि ट्राफिक चेकिङमा परिएला भनेर होसियारीपूर्वक भाग्दै-लुक्दै हिँड्ने चलन जो छ, त्यसलाई पनि कारवाहीकै रुपमा मान्दा हुने उनको तर्क छ ।
तर, मापसे गरेर अन्धाधुन्ध गाडी चलाउने, आफूभन्दा अरु असुरक्षित हुने स्थितिमा ट्राफिकले पिछा गरेरै समाउँछ ।
आइजीपी बन्ने सपना
सरकारले चैत २९ गतेभित्र नेपाल प्रहरीको २६ औं महानिरीक्षक नियुक्त गर्दैछ । उक्त पदका लागि प्रतिस्पर्धायोग्य मूलतः तीन डीआइजी छन्, सर्वेन्द्र, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की । यिनीहरु क्रमशः एक, दुई र तीन नम्बरमा एसएसपीबाट डीआइजीमा बढुवा भएका हुन् ।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकसहित सबै अतिरिक्त महानिरीक्षक र धेरै संख्यामा नायव महानिरीक्षक -डीआइजी) चैत २९ मा ३० वर्षे सेवा हद लागेर अवकास हुँदैछन् । त्यसपछि ०७६ चैतसम्मका लागि प्रहरीको कमाण्ड हाँक्ने जिम्मा ९० बेसिकका इन्स्पेक्टरहरुको काँधमा आउँदैछ । उनीहरु त्यही ब्याचमा भर्ना भएका हुन् । यसबारे जिज्ञासा राख्दा सर्वेन्द्रले धेरै केही भन्न चाहेनन् । भने, ‘हेर्दै जाऔँ ।’- साभार अनलाइन खबरबाट